Punta Cana - Ny zava-dehibe tokony hatao sy hojerena | Travel tanteraka
Susana godoy | | Repoblika Dominikanina
Tsy ilaina ny milaza fa i Punta Cana dia iray amin'ireo toerana tadiavina indrindra. Satria raha manonona ny anarany fotsiny isika dia mahatsapa fa ny tora-pasika dia ilay paradisa tadiavin'ny ankamaroan'ny mpizaha tany, fa marina fa ankoatra ny mankafy ireo zoron'ny masoandro sy ny fasika ary ny rano turquoise, Ny dia mankany Punta Cana dia manome zavatra tsy manam-petra ho antsika.
Angamba ianao manana ny hevitra ankafizo ny sasany amin'ireo tora-pasika mahavariana, ary mazava ho azy fa iray amin'ireo tena ilaina amin'ny fialan-tsasatra Punta Cana.. Saingy satria mankafy andro tsy fiasana ianao dia manana safidy hafa izay tianao koa. Raha tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana dia aza manahy fa efa nanao ny asa ho anao izahay. Alohan'ny hialanao tanteraka dia tadidio ny misafidy a sidina miampy hotely Punta Cana. Nahoana? Satria ianao dia handeha miaraka amin'ny fiarovana sy ny fampiononana amin'ny fananana ny zava-drehetra mihidy tsara na mifamatotra. Eny izao, tongasoa na tongasoa amin'ny fialan-tsasatrao!
1 Amboary ny dianao mankany Punta Cana miaraka amin'ny fonosana fialan-tsasatra rehetra
2 Ny fitsangantsanganana voalohany naroso: Los Haitises National Park
3 Tsidiho ny Isla Saona
4 Mitsitrika any amin'ny nosy Catalina
5 Santo Domingo, fitsidihana ara-kolontsaina indrindra
6 Ny hetsika tsara indrindra azonao atao ao Punta Cana
Amboary ny dianao mankany Punta Cana miaraka amin'ny fonosana fialan-tsasatra rehetra
Ny dingana voalohany ahafahanao mankafy ny tenanao bebe kokoa noho ny taloha dia ny misafidy ny fialan-tsasatra Punta Cana izay misy rehetra. Satria amin'izay fotoana izay ihany no ahafantarantsika fa manana ny rejisitra fampiantranoana izay misy ny serivisy rehetra. Noho izany, amin'izany fomba izany dia tsy maintsy mifantoka fotsiny amin'ny fankafizana ny hetsika rehetra mahaliana anao ianao ary mamela ny tenanao handeha amin'ny hafainganam-pandeha milamina kokoa, tsy manahy momba ny toerana hisakafoana na ny fotoana. Mazava ho azy, amin'ny tranga hafa Rehefa miresaka momba ny trano fandraisam-bahiny ao Punta Cana isika dia tsy maintsy milaza ny fampiononana lehibe ho hitantsika ao aminy. Midika izany fa hisy andro tsy hilainao hivoaka, satria ho hitanao izay rehetra nirinao.
Mazava ho azy fa rehefa manao famandrihana amin'ny hotely dia tsy maintsy mieritreritra ihany koa ny iray amin'ireo safidy takiana indrindra izay mifantoka amin'ny sidina miampy hotely Punta Cana. Hevitra tonga lafatra satria hanakatona ny dingana roa lehibe indrindra alohan'ny hiaingana. Amin'izany fomba izany dia afaka mahita tolotra izay horaisina foana isika.
Ny fitsangantsanganana voalohany naroso: Los Haitises National Park
Efa nanao famandrihana ho an'ny dianay ho any Punta Cana izahay, ka rehefa tafapetraka izahay dia manomboka ny aventure. Aventure izay manomboka amin'ny iray amin'ireo toerana hitsidihana voalohany. Io no Valan-javaboahary ao amin'ny Helodranon'i Samaná. Hahafinaritra anao ny faritra lavitra ny toeram-pialan-tsasatra rehetra ao amin'ilay faritra. Ao anatin'izany no ahitanao ireo antsoina hoe 'mogots' izay karazana havoana na tany avo izay noforonin'ny natiora. Afaka tonga an-dranomasina ianao ary mahita ireo lava-bato isan-karazany izay misy trano toy izao, feno tsiambaratelo nefa tena tsara tarehy.
Tsidiho ny Isla Saona
Anisan’ny fitsangantsanganana be mpitady indrindra ary ny antony dia noho ny fisian’ireo tora-pasika tsara tarehy feno rofia, tsy vitan’izany fa miaraka amin’ny haran-dranomasina ihany koa. Tsy azo ihodivirana fa ny trano fandraisam-bahiny ao Punta Cana dia nampidirina tao anatin'ny fonosana na fotoana fialan-tsasatra natolony indrindra. Any no hahitanao an’i Mano Juan, izay tanàna mpanjono mangina., izay haharesy anao, noho ny trano fonenany maro loko sy ny nahatongavany ho toeram-pitsangatsanganana sokatra.
Mitsitrika any amin'ny nosy Catalina
Ny iray amin'ireo nosy izay azonao tsidihina koa dia ity. Nantsoina hoe Catalina satria izany no niantsoan'i Christopher Columbus azy tamin'ny 1494. Izy io dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny fizahan-tany ary ao anatin'izany ianao dia afaka entin'ny hetsika toy ny diving. Zavatra mahazatra foana amin'ny faritra malaza toy izany. Noho izany, rehefa avy nitety ny nosy, tsy misy toy ny nisafidy ny hanao fanatanjahan-tena kely. Ho raiki-pitia amin'ny fomba fijeriny feno zavaboary.
Santo Domingo, fitsidihana ara-kolontsaina indrindra
Raha mifoha maraina ianao indray andro ary te hanao fitsangatsanganana ara-kolontsaina, tsy misy toy ny mandeha any Santo Domingo. Avy any Punta Cana dia adiny telo eo ho eo amin'ny fiara. Fa ho mendrika izany, ary be dia be. Satria izy no iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Karaiba manontolo. Manana foibe manan-tantara misy manda ary koa tranobe efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Eto amin'ity toerana ity ihany koa dia afaka mankafy ny katedraly sy ny lapa voalohany ianao izay nananan'i Amerika. Tsy mahagaga raha Lova Iraisam-pirenena izy io
Ny hetsika tsara indrindra azonao atao ao Punta Cana
Isaky ny faritra tora-pasika, izay betsaka indrindra araka ny efa voalaza teo aloha, dia tsy hilentika na handro foana ianao. Noho izany dia afaka mandany fotoana amin'ny hetsika manokana indrindra ianao. Efa niresaka antsitrika izahay fa Tsy adinontsika koa ny mamakivaky faritra be fasika amin’ny quad na mitaingin-tsoavaly. Inona no tianao kokoa? Angamba afaka manidina eny ambonin'ny faritra na manao fanatanjahan-tena. Tsy isalasalana fa misy safidy ho an'ny tsiro tsirairay. Miloka amin'ny fialan-tsasatra nofinofy ary aza manahy ny amin'ny paosinao satria ny sidina Punta Cana plus hotel dia afaka mandeha miaraka, ao anaty fonosana ary mamonjy anao. Hitondra entana ve isika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Zava-dehibe tokony hatao sy hojerena amin'ny dianao mankany Punta Cana